Budata Cooking Simulator APK maka Android
Budata Cooking Simulator
Budata Cooking Simulator,
Isi nri Simulator bụ ohuru nri simulator na kichin egwuregwu. Jikere ịmalite njem nri gị na nri simulator!
Budata Simulator Nri
You na-egwu egwuregwu ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, egwuregwu nri, egwuregwu bred, egwuregwu nri ngwa ngwa ma ọ bụ egwuregwu ịtụ nri? To nwere ike isi nri? Egwuregwu ịme egwuregwu na-amasị gị? You bụ onye na-akwado egwuregwu egwuregwu na-eri ahụ oge? Ọ bụrụ EE”, ị nọ nebe kwesịrị ekwesị. Isi nri igwe: Kitchen na Cooking Game bụ nri egwuregwu nihi na ị.
Isi nri Simulator Mobile: Kitchen & Nri Egwuregwu bụ ihe pụrụ iche free kichin simulator egwuregwu maka onye ọ bụla. Atụmatụ ndị na-eme ka isi nri Simulator Mobile na-eri ahụ na ọchị:
Kpọghee ekwt elu Ezi ntụziaka, esi nri na-atọ ụtọ nri na-a kpara kpara siri nri.
Pụtara eserese na mara mma visual mmetụta
Ezigbo ezi uche, dị egwu, kichin ejikere nke ọma
Nri iji kwadebe (sie ma kwadebe ezigbo nri dị ụtọ: ofe tomato, salmon steak na sie poteto, achịcha akpọrọ, poteto cutlet, eghe eghere eghe, ofe eghe eghe, eghe eghe, eghe eghe, eghe eghe eghe, ofe brọki apụl, na ndị ọzọ)
Jiri arịa kichin dị iche iche (pans, pans, nnukwu efere, obere efere, efere miri emi, efere achịcha, ighe eghe eghe, obere mmiri, bọọdụ e ji egbutu osisi, ihe eji esi nri, ihe eji esi nri, mma, ihe na-agwakọta ya na ihe ndị ọzọ)
Meziwanye usoro isi nri gị na nka njikwa oge.
Ọtụtụ ngwa nri (ginger, nnu, ose, mmanụ oliv, thyme, balsamic, mmanya, basil, sugar, allspice na ndị ọzọ)
A nnọọ na-eri ahụ kichin na isi nri egwuregwu!
Hazie kichin gị (ala, mgbidi, ụlọ na ọtụtụ ndị ọzọ)
Egwuregwu oge na-eri ahụ
Gosiputa ikike gi
Mfe nghọta, ike Master!
Cooking Simulator Ụdịdị